Degdeg:- Sucuudiga oo biri Ciidiya iyo Dalal badan oo ku dhawaaqay in biri la soomayo “Akhriso magacyada”.
June 3, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 2
Wadamada Indunisia, Malaysia, Jaban, Mali, Safaarada Emirateka ay ku leeyihiin Thailand & Wadamo kale oo uu Muslimku ku badan yahay ayaa ku wada dhawaaqay in ay Bari tahay Maalinta 30aad ee Bisha barakaysam ee Ramadaan, lana soomayo.
Halka goordhowayd oo caawa ah ay Boqortooyada Sucuudiga ku dhowaaqday in ay Bari tahay Maalin Ciid ah, ama 1da Bisha Shawaal, iyadoona maxkamadda sare ee Aucuudigu sheegtay in Duhurnimadii Maanta bisha laga arkay Magaalada Tumayr ee Dalka Sucuudiga.
Dalka Soomaaliya dadka kunool, iyagu qolaba Wadan ayay ku xiran tahay oo ay la ciidaa lana soontaa, waliba mararka qaar bulshadeena Seddex Maalmood ayay kala ciidaan.
Waxaa jira dad kunool Gaalkaacyo oo shalay Ciiday galka qaar kalena biri ciidi doonaan iyadoona sidoo kale qolada sedexaad ay ciidi doonaan maalinta xigta.
Fiiro Gaar:- Marqaannews wali ma aysan ogaan meel kamid ah dalka Somalia oo laga arkay bisha ama qof somaliyeed oo xaqiijin kara inuu arkay bisha, waxaanse Akhristayaasheena ku wargelinaynaa inay nala soo xiriiri karaan hadii ay arkaan bisha ama ay ka war helaan cid aragtay.
War ummadda ha wareerina kulaha shalay ayaa laga ciiday Gaalkacyo. Acuudu Billahi mina sheydaani rajiim
Waxaan halkan Ciid Mubaarik kasii leeyahay dhamaan Umada Soomaaliyeed oo dhan. Kul’am wa antum bi-kheyr.
Xerta aanu Marqaan weyne isku dhex xagxagano oo dhan iyagoo jamaca oonan kala qaad qaadey ayaan leeyahay ciid mubaarik.
Waxaan halkan si kal iyo laab ah uga salaamayaa dhanka Marwooyinka;
Walaashey Warsan – hadey I maqleyso.
Iyo inta kale een ka tegay.
Dhamaantii waxaan idiin rajeynayaa bashbash iyo Barwaaqo. Ciidan ciideeda ku gaadha caafimaad iyo camal Suuban.
Daawo Degdeg:- Gabadhii hadiyad ahaanta loo guursaday oo lasoo furay + Muuqaal murugo badan oo ay soo duubtay.
DAAWO:- Muuse Biixi oo been ku qanciyay shacabkiisa “Shacabka Sool iyo Sanaag waa dad qadiyad somaliland haysta, Badhan cidna nagama qabsan”.
DAAWO:- MD Xaaf oo si adag ugu goodiyay dadkii xasuuqa ka geystay Gaalkacyo + Weji kale oo uu yeeshay tacadigaasi.
DEG DEG+XOG: Xaaf oo ka been sheegay Arrinta Gaalkacyo & Sir la helay
DEG DEG+DAAWO: Meydka Wiil yar oo si xun loo dilay oo lagu arkay Muqdisho, Naxdin & Argagax oo laga qaaday
XOG:- Siyaasi soo bandhigay heshiisyo Shirqool ah oo ay Puntland la gashay Maraakiibta ka shaqeeya Jariifka kheyraadka Badda.
Madaxweynaha Puntland oo shaaciyay labo arrin fashiliyay shirkii Garoowe, DF-kana ku adkeysatay